17 “Simba rangu roupenyu raputsika,+ mazuva angu apera; Guva randimirira.+ 2 Ndiri kusekwa,+ Ziso rangu rinoramba richiona kupandukira kwavo. 3 Ndapota, ndichengeterei chokumbofanobata changu.+ Ndianizve achabatana maoko+ neni sechokumbofanobata? 4 Nokuti makavharira mwoyo yavo kungwara.+ Ndokusaka musingavakwidziridzi. 5 Iye angaudza shamwari kuti dzitore migove yadzo, Asi maziso evanakomana vake achaneta.+ 6 Iye akandiita chirevo+ chemarudzi, Zvokuti ndava munhu anopfirwa mate muchiso.+ 7 Ziso rangu harichaoni nokuda kwenhamo+ Uye nhengo dzangu dzose dzaita somumvuri. 8 Vanhu vakarurama vanoramba vakatarira vachishamisika neizvi, Kunyange munhu asina mhosva anogumbukira mutsauki. 9 Munhu akarurama anoomerera panzira yake,+ Uye ane maoko akachena+ anoramba achiwedzera simba.+ 10 Zvisinei, imi mose tangaizve. Naizvozvo ndapota, rambai muchidaro, Zvandisingawani akachenjera pakati penyu.+ 11 Mazuva angu apfuura,+ zvirongwa zvangu zvakundikana,+ Izvo zvinhu zvaidiwa nomwoyo wangu. 12 Vanoramba vachiita kuti usiku huve masikati vachiti:+ ‘Chiedza chiri pedyo nokuda kwerima.’ 13 Kana ndikaramba ndakamirira, Sheori ndiyo imba yangu;+ Ndichawaridza mubhedha wangu murima.+ 14 Ndichashevedzera kugomba+ ndichiti, ‘Ndiwe baba vangu!’ Kuhonye+ ndichiti, ‘Ndiwe amai vangu nehanzvadzi yangu!’ 15 Saka zvino, tariro yangu iri kupi?+ Uye kana iri tariro yangu—ndianiko anoiona? 16 Ichaburukira kumizariro yeSheori, Isu tose patichaburukira kuguruva.”+